Publication | MEITI
Minint Cadaster Field Visit
MEITI reconciliation report 2015-2016
မြန်မာနိုင်ငံ EITI Reconciliation&nbsp Report 2015-2016 နှင့် ပတ်သတ်၍ ၃၀.၀၃.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ အင်းယားလိတ် ဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သော ဆယ့်သုံးကြိမ်မြောက် သုံးပွင့်ဆိုင်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးတွင် သုံးပွင့်ဆိုင်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ဝင် ကိုယ်စားလှယ်များမှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ် အတွက် EITI Report ထွက်ရှိရန် အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
meiti_super_user, 30.03.2018 | Posted in0comment
Regarding with MEITI Reconciliation Report 2015-2016 confirmed and approved by MSG Members on 13th MSG Meeting it was held on Yangon, Inya Lake Hotel.(30 March 2018)
MEITI Reconciliation Report 2014-2015
Regarding with MEITI Reconciliation Report 2014-2015 confirmed and approved by MSG Members on 13th MSG Meeting it was held on Yangon, Inya Lake Hotel.(30 March 2018)
မြန်မာနိုင်ငံ EITI Reconciliation Report 2014-2015 နှင့် ပတ်သတ်၍ ၃၀.၀၃.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ အင်းယားလိတ် ဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သော ဆယ့်သုံးကြိမ်မြောက် သုံးပွင့်ဆိုင်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးတွင် သုံးပွင့်ဆိုင်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ဝင် ကိုယ်စားလှယ်များမှ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ် အတွက် EITI Report ထွက်ရှိရန် အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ EITI Reconciliation Report 2015-2016 နှင့် ပတ်သတ်၍ ၃၀.၀၃.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ အင်းယားလိတ် ဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သော ဆယ့်သုံးကြိမ်မြောက် သုံးပွင့်ဆိုင်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးတွင် သုံးပွင့်ဆိုင်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ဝင် ကိုယ်စားလှယ်များမှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ် အတွက် EITI Report ထွက်ရှိရန် အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။